‘अब दैनिक सोच र भोज आफ्नै ठाउँ कस्तो बनाउने तिर लगाऔं’
जनताहरूले भन्दै आएको यो मुल समस्या आज प्रधानमन्त्रीलाइ अवगत हुनु र मुल समस्या हो यो भन्नु ठुलो कुरो हो । राजा, पंच, राजपा, काँग्रेस, कम्युनिस्ट सबैको समय देखि यस्तो हुदै आएको छ । अब यो नियन्त्रण र अनुगमनमा आउनु पर्छ । ठेक्का दिदा, सम्पन्न नहँुदा र सम्पन्न हुँदा दिइने लिइने अतिरिक्त बजेट र भाग नै हरेक योजना, परियोजना, निर्माण, कार्यकर्मको मुल समस्या हो । यसमा डन र टाठाबाठा जनले भन्दा दल, प्रशाशक, अदालतका फैसला र हात बाधक र हानिकारक बन्दै आएका छन् । माफी माग्ने र यस्तो जनताको बोली बोल्ने सायदै कुनै प्रधानमन्त्री नेपालले भेटेको देखेको थियो आज भेटिएको छ ।
सेवक होइन मालिक बन्ने नेता र सरकार मात्रै नेपालीले देख्दै भोग्दै आएका हुन । आफू मात्रै बन्ने देश नबनाउने शाशक र प्रशाशक मात्रै भोग्दै आएका छन नेपालीले । कर्म भन्ने काम नगर्ने जनता भोग्दै आएको हो नेपालले । मुल समस्या यो पनि हो । अब दल र जन नकरात्मक र असहयोगी भएर होइन अनि राज्यका संयन्त्र अनियमित र भष्ट्रचारी बनेर होइन । देश र जनताको साँचो हित सोचेर विधी, नीति, प्रविधी र प्रवृति बनाउन लाग्नु आजको आवस्यकता हो ।
एक जना ओलीले सपना देखाउँदा जसरी आम जनतामा आशा र उत्साह जागेको थियो । एक जना प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा, गर्न खोज्दैमा कुनै देशमा काम सम्पन्न हुदैनन् । यसको लागी सबै मन्त्री, सासंद, राज्यका संयन्त्र, पदाधिकारी , दल र जन सहयोगी र जिÞम्मेवारी बहन गर्ने बन्नु पर्दछ । नीति र विधि बन्यो होला । अब प्रविधी, पुँजि जम्मा गर्ने हो र बिकासका पुर्वाधार बनाउने हो अनि जग र आधार बनाउने हो, तब नै घर र छाना बनेको केहि बर्षमा देखिने हो । आजको आजै न राणाले न राजाले न काग्रेस , राप्रपा, राजपाले न कम्युनिस्टले कुनै शाशन र शाशकले गर्न सक्दैन । बिकास आजको आजै हुदै हुदैन ।
आफ्नो ठाउमा कुन सरकार बनाउने भन्ने होड र भोटमा होइन कुन निर्माण र सुविधा बनाउने हो भन्ने सोच र व्यवहारमा वडा, गाउँ, नगर, स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार लागे केन्द्र सरकारलाइ गाली गर्नै पर्दैन । केन्द्र सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन । जसरी आफ्नो घर र परिवार घर र परिवार भित्रका सदस्यहरूले नै पाल्ने र बनाउने हो । त्यस्तै आफ्नो वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश आफ्नै जनता र सरकारहरूले बनाउने हो ।
गायकले गीत गाउन आजको आजै सकेको हो र ? बाटो र घाटो सबै तिर गाउन थाले पछि न गाउन सफल हुने हो । रामकृष्ण र अशोक दर्र्जी आजको आजै गायक बनेका होइनन् । रानु मन्डल र माइकल ज्याक्सन पनि त्यस्तै हो । मुख्य कुरा विधी र सुरूवात हो यो जायज र नायकमुखी बनिनु पर्छ । आज ओलीले जे बोलेका छन् । मुख्य समस्या र बाधक पक्ष उजागर गरेका छन् । राजनैतिक संग्लनता र अनियमितता हरेक क्षेत्र र विकासको बाधक हो । यसको पहिचान भएसँगै यसको सर्जरी पनि हुन आवस्यक छ । यसमा प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारलाइ सबै दल र जनले साथ दिनु पर्छ । भ्रम, हल्ला, अवरोध मात्र गर्ने र सधै नकरात्मक मात्र हुने हो भने धार्मिक मेला गर्न र पूजा गर्न पनि चुनाब हुन्छन् । विभाजित र विरोधी परिवार र समाज बनि रहन्छन् । राज्य र सरकारको त के कुरा भो र ! दल र जनको के कुरा भोर ! जग गतिलो बने न घर नढल्ने हो परिवार दुर्घटनामा नपर्ने हो । घर, परिवार र छिमेकी सुरक्षित रहने हो । सबै सकरात्मक र सहयोगी नबने सम्म मानव जीवन र समाज सभ्य बन्दैन । देश भव्य अनि सम्वृद्ध बन्दै बन्दैन ।
आफ्नो ठाउमा कुन सरकार बनाउने भन्ने होड र भोटमा होइन कुन निर्माण र सुविधा बनाउने हो भन्ने सोच र व्यवहारमा वडा, गाउँ, नगर, स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार लागे केन्द्र सरकारलाइ गाली गर्नै पर्दैन । केन्द्र सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन । जसरी आफ्नो घर र परिवार घर र परिवार भित्रका सदस्यहरूले नै पाल्ने र बनाउने हो । त्यस्तै आफ्नो वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश आफ्नै जनता र सरकारहरूले बनाउने हो । केन्द्र सरकार त अविभावक र सहयोगी मात्र हो । घरको मुली या सदस्य कुलतमा लागे, आम्दानी हुने काम नगरे, भएको सम्पति र जमिन दुरूपयोग र सक्ने तिर लाग्यो भने घर बिग्रन्छ । परिवारले दुःख पाउछ । सधै पिर, चिन्ता, दुःख र समस्यामा पर्छ । देशको सरकार र राज्यका संयन्त्र र समाज पनि त्यस्तै हो । सरकार प्रमुख या सदस्यहरू । राज्यका अंगका प्रमुख या सदस्यहरू दुराचारी र भष्ट्राचारी बने, देशले दुःख पाउछ । जनताले अभाव र असुरक्षामा बाच्नु पर्छ ।
आज सरकार, राज्यका सबै अंग र आम जन क्षेत्रका मानिसले यो सोच्नु र आफ्नो आवस्यक र जायज भुमिका निभाउन तिर अग्रसर हुनै पर्दछ । विवाद र अवरोध मात्र गर्ने होइन । कस्तो विकास चाहिने हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी त्यसमा दबाब अनि साथको थालनी गरिनु पर्दछ । भएन मात्र भन्ने होइन गराउन बनाउन केहि न केहि गर्ने थालनी गरिनु पर्दछ । देशमा भएन भनेर कराउने होइन आफ्नो जन्म र वासस्थान बनाउन र के चाहिने हो ल्याउन सबै लाग्ने हो भने देशभरी सुविधा र सेवा, रोजगारी र सुरक्षा बन्दै जान्छन । अब हाम्रो दैनिक सोच र दैनिक भोज आफ्नै ठाउँ कस्तो बनाउने तिर लगाऔ । आखिर परिणाम र निर्माण हाम्रै साथ र हातबाट नै निर्मित हुने हुन । सम्भव र सफल हुने हुन् ।